[Review Sách] "Tĩnh Lặng": Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng Trong Thế Giới Huyên Náo | Anybook.vn - Anybook
[Review Sách] “Tĩnh Lặng”: Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng Trong Thế Giới Huyên Náo | Anybook.vn
Mangina, mendrika hovakiana ho an’ny rehetra, satria miaina ao anatin’ny tontolo mitabataba isika, mila fotoana hialana sasatra ny tsirairay. Ny boky koa dia safidy azo omena ho fanomezana ho an’ireo izay tiantsika, izay tokony hanome ny tenany fotoana mangina aorian’ny taona maro niainana. Na izany aza, ny mpamaky, indrindra fa ny tanora izay mandalo ny fiakarana sy ny fihemorana, dia tokony hamaky ny boky amin’ny fotoana hahavonona antsika hisaintsaina ny lasa sy ny lasa ary ny ho avy.
Ianao, izaho na ny tanora mifanolo-bodirindrina isan’andro, tsy an-kanavaka, dia olom-pirenena arivo taona, mandova ny fandrosoana sy ny fampandrosoana ny maha-olombelona. Miaina ao anatin’ny fiarahamonin’ny teknolojia isika, amin’ny zavatra rehetra mifandray, ny mipetraka mangina dia afaka manasa ny namanao hiara-hiaka rehefa afaka ora vitsivitsy amin’ny telefaona. Tena mifanakaiky, fa indraindray ianao dia mahatsapa fa mila toerana iray ianao mba hahazoana aina. Amin’ny fotoana iray, misy olona manoro hevitra anao hoe “Tony! Raha misy tsy mety dia voavaha moramora izany!”. Matetika no mitranga amiko izany, amin’ny maha-tanora mahazatra ahy, dia manana zavatra maro hizarana ny fotoanako aho: ny asan’ny orinasa, ny asa tetikasa, ny fianarana teny vahiny, ary ny fifandraisana. Mbola nandeha ara-dalàna daholo ny manodidina ahy, mandra-pahatongan’ny andro iray tamin’ny faran’ny taona dia nientanentana aho nijery ny zava-bitako tamin’ny taon-dasa. tsinontsinona ny valinteniko! Niraharaha loatra ve aho fa tena tsy tonga tany amin’ny faran’ny saha mihitsy? – Manontany tena aho hoe. Raha nandany fotoana kely tamin’ny fiarahana aho dia ho nahavita ny fianarana teny anglisy. Raha te hifantoka amin’ny fanombohana aho dia tsy tokony hanao asa be loatra ao amin’ny birao. Tsapako, izaho sy ianao – mitovy isika, samy noforonin’ny zanatsika mba hihodina ao anatin’ny fiarahamonina “faingana toy ny rivo-doza”, izay tsara vintana kokoa, manana titre amin’ny sehatra iray, saingy tsy azo ihodivirana izany. tsy tsara ny extremes.
Indray andro, naka boky aho hanasitrana ny eritreritro, Mangina – Ny boky faha-11 an’i Zen master Thich Nhat Hanh. Io no safidy nety, fara faharatsiny ho an’ny saiko tamin’ny fotoana nikorontanana rehetra. Raha toa ka sahirana koa isika tanora noho ny antony iray, ny fo tso-po ao Mangina ho fomba iray misy dikany rehefa mandinika ny zava-nitranga.
Mangina dia boky amin’ny karazana fahaiza-manao, saingy tsy mitovy amin’ny fahaiza-manao feno raikipohy sy torolalana avy amin’ny mpialoha lalana iray. Ny boky dia manome fomba fijery milamina, tsy ho an’ny famakiana fotsiny, fa ho an’ny fisainana sy ny fahatsapana.
Mangina, mendrika hovakiana ho an’ny rehetra, satria miaina ao anatin’ny tontolo mitabataba isika, ny tsirairay dia mila maka fotoana hialana sasatra. Ity boky ity koa dia safidy azo omena ho fanomezana ho an’ireo izay tiantsika izay tokony hangina kely aorian’ny taona maro niainana. Na izany aza, ny mpamaky, indrindra fa ny tanora izay mandalo ny fiakarana sy ny fihemorana, dia tokony hamaky ny boky amin’ny fotoana hahavonona antsika hisaintsaina ny lasa sy ny lasa ary ny ho avy.
READ 10 cuốn sách giúp bạn yêu đời hơn | Anybook.vn
Thich Nhat Hanh dia tompon’ny Zen vietnamiana izay heverina ho mpitarika Bodista faharoa nanan-kery indrindra tany Andrefana taorian’ny Dalai Lama faha-14 (Tenzin Gyatso). Boky nosoratan’ireo tompo Zen, natokana ho an’i Buddha sy Mind Dharma, izay ahafahan’ny mpamaky mikaroka ny maha-izy azy, ary “saina tsy miova eo anivon’ny onja fiainana tsy mitsaha-miova.”
Alohan’ny hilazana ny votoatiny Mangina, Andeha isika handinika hevitra roa am-po SY Static.
Miresaka momba ny Fo, Nanoratra tamin’ny teny Norveziana Wood ny mpanoratra Murakami: Samy manana ny alany avy ny tsirairay, angamba tsy mbola nandalovan’izany isika, fa teo ary mbola hisy foana. Ny ala no fototry ny olona tsirairay, toerana tsy azon’iza na iza kitihina, izay misy azy foana na iza na iza isika rehefa mandeha ny fotoana. Ny fo sy ny fihetseham-po dia Fo, SAINGY am-po Tsy ny fo sy ny fihetseham-po ihany. am-po no ivon’ny fototra, ary loharanon’ny zavaboary.
Miresaka momba ny Static, Matetika isika tanora no mihevitra azy io ho ao anatin’ny toe-javatra tsy mihetsika. Mianara koa anefa isika, mihetsika foana ny zava-drehetra, satria ny molekiola bitika dia mihetsika tsy tapaka. Raha fintinina, in voasakantsakan’ny
ENY Motion. Raha lazaina amin’ny fomba hafa, voasakantsakan’ny no faritra ambony indrindra amin’ny fihetsehana, mizotra mankany amin’ny fahanginana. Toy ny renirano izy io, toa tsy miato, fa ao anatiny dia misy zavatra tsy tambo isaina izay mikoriana miaraka amin’ny fikorianan’ny rano. voasakantsakan’ny Karazana fahendrena koa izany.
Ny votoatin’ny boky dia manonona hevitra tranainy maro nefa vaovao. Ny taloha dia ao anatin’ny olana mitranga isan’andro eo amin’ny fiaraha-monina, ny vaovao dia eo amin’ny fomba fijery ny zava-misy sy ny fibanjinana:
Mandany fotoana betsaka amin’ny fitadiavana ilay antsoina hoe fahasambarana isika, nefa feno fahagagana ny tontolo manodidina antsika. Ny fahasambarana dia zavatra resahin’ny olona isan’andro, isan’ora, na isa-minitra, fa tena tsy misy afaka mamaly ilay fanontaniana. Inona no atao hoe fahasambarana? Ny fahasambarana dia rehefa mitsiky ny olona sa tsia?
Hahazo valiny hafa ianao ary mety mitovy amin’ireo fanontaniana etsy ambony ireo, saingy ny ankamaroantsika dia mila mieritreritra indroa alohan’ny hamoahana valiny marobe. Izany hoe, vitsy ny olona afaka matoky ny heviny momba ny fahasambarana. Indraindray izy ireo dia mihomehy, saingy ao ambadik’izany tsiky izany dia tsy takatry ny olona maro. Izany no mahatonga ny olona hihazakazaka hitady fahasambarana. Ahoana anefa no hahitany izany raha tsy mazava ny tadiaviny. Ny hany zavatra very dia ny fotoana.
Mangina Raha ny fahasambarana no resahina dia amin’izao fotoana izao fa amin’izao fotoana izao ihany. Ny fihetseham-ponao amin’izao fotoana izao dia fahasambarana, ny alahelo dia endrika fahasambarana ihany koa. Ny feon’ny vorona renao rehefa ao anaty zaridaina ianao dia tsy ny rehetra no mandre izany. Ny fepetra ilaina mba hiainana amin’izao fotoana izao dia ny hoe tokony hangina ny saintsika mba handre hoe iza isika.
Raha efa feno tabataba ny saintsika, ahoana no fandrenesantsika zavatra? Toy ny any am-piasana, ny fianarana dia mitaky antsika hifantoka amin’io fotoana io, fa ny vatantsika sy ny saintsika dia miezaka mamaha izany mba hanana fotoana hivoahana, na hieritreritra zavatra hafa, dia mora voafandrika ao anatin’ny dingana. fahadisoana. Noho izany, mianatra isika fa, rehefa miatrika olana, ny olana voalohany dia mipetraka ao an-tsaina. Tokony hizatra mandre izay feontsika sy izay tabataba any ivelany isika.
READ Review Sách Thuật Tư Tưởng - Xây Dựng Bộ Óc Tư Duy Theo Tinh Thần Khoa Học | Anybook.vn
Rehefa mihaino tsara isika dia tsy hitady ny valin’ilay fanontaniana intsony ny tenantsika Inona no atao hoe fahasambarana? Fa izahay kosa dia manaiky fa tsy mbola nieritreritra tsara an’io fanontaniana io mihitsy izahay teo aloha, ary rehefa mieritreritra izany izahay dia avy hatrany dia hanome ny valiny tsy mila mandany fotoana.
Isan’andro dia mihaona amin’ny olona maro isika, tantara mahaliana, poetika ary hafahafa. Tsy misy manome tsiny ireo tantara mitranga any ivelany ireo satria raisintsika ho azy izany. Mora voataonan’izy ireny anefa isika. Mora tezitra isika satria ny hafa mibedy antsika, mitaona ny zavatra tsy misy, mifanakalo hevitra. Amin’izay fotoana izay dia miteny ny fontsika fa tsy matanjaka ny saintsika handre izany antso izany, dia avelantsika hanafotra antsika ny tabataba avy any ivelany.
Rehefa tapitra ny tantara dia tsapantsika fa tsy tokony ho toy izany tokoa isika. Indraindray, ny tenantsika aza mieritreritra teny roa raha… Amin’izay fotoana izay dia mila isika Sainamampitony ny tabataba ao anatiny ilay fanao.
raha tsy manana Saina, mety ho voafehin’ny zavatra maro isika. Mora mihetsi-po isika noho ny nenina sy ny alahelo taloha. Tsaroantsika ny fahatsiarovana, ny fahatsiarovana nodiavintsika, ny nijaly ombieny ombieny, ny nijaly hatrany ny fanaintainana izay nolalovanay. Aza mandà ny zava-niainana taloha, fa koa aza avela hanafotra ny zava-misy, fa nianatra lesona isika, dia lasa marani-tsaina kokoa. Saina ampio izahay hahita ny toerana misy anay, izay tokony hatao amin’izao fotoana izao fa tsy mieritreritra ny lasa. Ny fifehezana ny fihetseham-po avy amin’ny lasa dia manampy antsika hihoatra ny fetran’ny ankehitriny sy ny any ivelany.
Etsy ankilany, maro amintsika koa no ho voasarika amin’ny ho avy, tsy dia maro no sahy mijery ny ankehitriny. Manahy sy matahotra zavatra tsy mbola nitranga na efa hitranga isika ary mikoropaka amin’izao fotoana izao, rehefa mila ny tenantsika isika. Na raha tsy manahy isika dia manantena zavatra mampientanentana kokoa, zavatra ho avy hanova ny fiainantsika, satria amin’izao fotoana izao dia ketraka be isika, tsy misy zavatra manokana. Izaho dia mila Saina, mba tsy ho voasariky ny tabataba manodidina, sy ny tabataba ao an-tsaina.
Saina, ho fampahatsiahivana antsika hijanona, ary hihaino amim-pahanginana ao anatin’ny tabataba. Raha ny marina, amin’izao vanim-potoanan’ny fampidirana izao dia tsy mangina foana isika. Saingy raha fantatsika ny fotoana tokony hangina, dia afaka miditra amin’ny lafiny tsara indrindra amin’ny tenantsika isika, ny antsika Saina. Rehefa tena aho voasakantsakan’nydia rehefa eo amin’ny ambaratonga ambony indrindra ny saintsika.
Mieritreritra ny fahanginana isika, izay mampitony ny saintsika alohan’ny olana amin’ny fotoana. Hanana hevitra momba ny Saina ary ny fahafantarana ny zava-misy dia ilaina ny fiadanana anaty. Eny tokoa, raha sendra olona tony toy ny rano isika manoloana ny zava-dehibe, dia ho talanjona isika, toy ny nataon’ireo olon-kendry fahiny, izay vao mainka tsy afa-po, no mitana ny fahadiovany.
READ 11 quyển sách hay về quản lý con người ứng dụng trong nhiều mặt của cuộc sống | Anybook.vn
Tsy foto-kevitra sendra anao amin’ny fizika izany fa foto-kevitra ny feon’ny tsy misy feo. Ny fahanginana dia matetika lazaina ho tsy fisian’ny feo, nefa koa feo tena mahay miteny. Boky Mangina mamaritra karazana feo 05 eo amin’ny fiainana: Feo mahagaga, Avalokitesvara, Pham Yin, Filazantsara, Fandresena amin’ny tontolo ratsy. Ireo feo ireo dia mitondra dikany samihafa saingy voafaritra amin’ny hetsika mangina avokoa. Raha ny marina, rehefa mangina isika dia mieritreritra zavatra iray, mihaino ny feontsika manokana. Ary tsy ireo hevitra vaovao ireo, dia zavatra ataontsika isan’andro nefa tsy fantatsika akory hoe inona izany.
Ny fahaizana mihaino io feo io, dia toetra mampiavaka ny olona iray ihany koa. Hanontany tena isika Nahoana no misy olona mahazo ny tantarako? Ary misy ny valin’ny eritreritra: Nahoana no tsy misy mihaino ahy? Raha teo amin’ny tena fiainana no nisy an’io tantara etsy ambony io, dia hihaino antsika ny olona roa anontaniantsika, fa ny feontsika ao anaty dia mamela ireo akony ireo hamaritra hoe mihaino ny iray, ary mihaino ny iray. Ny feontsika tsy misy feo dia nahatsikaritra ny olana ho toy izany, saingy avy ao am-po isika dia mila mangina.
Mangina dia faritana ihany koa ho endriky ny fandrenesantsika ny feon’ny maha-izy azy. Natao tamin’ny tany, rano, rivotra, hazavana, afo ary zavaboary. Teraka tamin’ny taranaka teo aloha. Noho izany, ny fihainoana ny feo anaty dia mitovy amin’ny fihainoana ny antson’ny fahanginana, ny fampitsaharana ny famoronana. Tsy voatery hoe manenjika ny fampiononana ara-nofo na ny fampiononana ara-pihetseham-po, tsy mila manontany ny fomba hahazoana vola ampy, ny fomba hahazoana trano, na fanontaniana toy ny hoe Misy olona tena tia ahy ve…
Tena ilaina ireo fanahiana ireo, saingy ny sasany amintsika dia mandany fotoana be loatra amin’izany, ka tsy mahita ireo feo milamina sy mibanjina tena.
Mihamitombo hatrany ny miaina ao anatin’ny fampiononana amin’ny fotoana, ary mandova ny teknolojia fifandraisana amin’ny lafiny maro. Saingy misy lafiny roa amin’izany koa, afaka manadino mora foana ny maha-izy azy ny vatantsika sy ny saintsika mba hanomezana toerana ho an’ny toerana mitabataba. Nanomboka teo dia very ny tenantsika isika, na mihantona fotsiny amin’ny eritreritra momba ny fiainana feno fahasahiranana sy fahasahiranana, na misafidy ny fomba fiaina mahafa-po loatra, tsy mitady izay mety.
Safidy manokana ihany mantsy ireo, ary ho takatry ny rehetra izany. Mangina – ny boky dia manome fomba fisainana momba ny fahitana ny olona tsirairay mazava sy am-pitiavana. Io koa no fanalahidin’ny korontana ateraky ny fiainana. Ny mpamaky, ary ny millennial manokana, dia tokony hahafantatra sy hahatakatra ny zavatra avy ao anatiny, fa tsy ny fironana amin’ny vanim-potoana.
Mpanoratra: G-Br – Bookademy
Previous: 200+ Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành nhân sự HR cần biết | Anybook.vn
Next: JD công việc là gì? Nội dung chính cần có trong JD | Anybook.vn